Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 15)
Moto Z4 gabi ahaanba wuu dusay: Snapdragon 675, shaashadda OLED, kamarad sawir qaade 25 MP ah iyo inbadan
Daabacaadda Hindida ayaa dhowaan la wadaagtay qeexitaannada muhiimka ah iyo astaamaha Moto Z4, iyagoo si bareer ah u dhigaya.
Samsung waxay ku shaqeysaa laba nashqadood oo isku laaban laba shaashadood
Marka loo eego tilmaamaha ugu dambeeya, Samsung Display wuxuu ka shaqeynayaa qaabab isku laaban oo leh "8 iyo 13" nooc.
Realme C2: Nooc cusub oo nooc heer-gal ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Realme C2, casriga cusub ee casriga hoose ee laga helo nooca Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Waa kama dambeys: Samsung ayaa si aan la cayimin dib ugu dhigeysa iibinta Galaxy Fold
Samsung ayaa dib u dhigeysa soo bandhigida Galaxy Fold waxayna markale shaacin doontaa todobaadyada soo socda. Dhibaatada shaashadda sababta.
Realme 3 Pro: Nooca cusub ee bartamaha
Soo ogow qeexitaannada dhameystiran ee Realme 3 Pro, casriga cusub ee dhexdhexaadka ah ee nooca Shiinaha horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Maamulaha OnePlus ayaa shaaca ka qaaday in OnePlus 7 Pro uu lahaan doono bandhig cajiib ah
OnePlus wuxuu ku faanaa in shaashadda soo socota ee OnePlus 7 Pro ay noqon doonto beddel ciyaarta, maadaama ay noqon doonto mid cajiib ah, iyo sidoo kale ka qaalisan.
Redmi ee soo socota ee soo socota, oo sidoo kale noqon karta qalabka ugu raqiisan SD855, ayaa taageeri doona NFC iyo lacag-bixinta wireless-ka ah.
Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in Huawei ay dib u dhigtay daahfurka Mate X illaa Sebtember, laakiin khubarada ayaa shaaca ka qaaday in taasi aysan run ahayn.
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa Xiaomi Redmi Note 7 cusub, tusaale aad u cad oo ku saabsan waxa ay bixiso Xiaomi, qiimaha ugu fiican ee lacagta aad heli doonto
Samsung ayaa joojisay dhacdadii Galaxy Fold ee Spain ka dhacday
Ogow wax badan oo ku saabsan baajinta dhacdadii Galaxy Fold ee Spain iyo dib u dhaca suurtagalka ah ee bilaabida taleefanka Samsung.
Galaxy S10 wuxuu bilaabaa inuu helo cusboonaysiinta amniga ee u dhiganta Abriil
Dhamaan boosteejooyinka qaybta ka ah Galaxy S10 waxay bilaabeen inay helaan balastarka amniga ee u dhigma bisha Abriil.
LG X4 2019: Noocyada soo gelitaanka cusub ee sumadda
Ka ogow wax badan oo ku saabsan LG X4 2019 cusub, taleefanka cusub ee dhammaadka-hoose ka socda ee sumadda Kuuriya ee horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Nubia Red Magic 3 wuxuu ka dhex muuqdaa tartan ciyaaraha ah
Red Magic 3 ayaa lagu soo bandhigay finaladii shalay ee League of Legends LPL Spring Championship oo waxaan haynaa qaar ka mid ah sawiradeeda.
Samsung ayaa joojisay iibkii hore ee Galaxy Fold ee Shiinaha
Ka ogow wax badan oo ku saabsan baajinta dhacdo Galaxy Fold ah oo ka dhacda Shiinaha sababo la xiriira arrimaha taleefanka.
LG waxay u idmantahay taleefan casri ah oo wata lix kaamiro
Raadi wax badan oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee ay LG soo martay oo wadar ahaan dhan lix kamaradood, saddex dhinac kasta leh, sidaad horeba u aragtay.
DxOMark waxay cusbooneysiisaa dib u eegista LG V40 ThinQ waxayna sare uqaadeysaa dhibcaheeda
DxOMark waxay soo saartay cusbooneysiin ku saabsan LG V40 ThinQ dib u eegis taas oo garaacaysa dhibcaha guud ee moobiilku helay maalmo ka hor.
Cajiib ah !! Soo dejiso oo rakib codsiga muusikada ee Samsung Galaxy S10 wax kasta oo Android ah
Muuqaal fiidiyow ah oo aan ku tusayo sida loo soo dejisto arjiga muusikada ee Samsung Galaxy S10 si loogu rakibo wax kasta oo Android ah.
HMD Global ayaa diyaarinaysa Nokia cusub oo leh shaashad dhan 6.1 inji
HMD Global waxaa laga yaabaa inay dhowaan ku dhawaaqdo taleefan cusub oo Nokia ah, maaddaama FCC ay oggolaatay qalab cusub oo leh lambarro noocyo badan leh.
Talaadada waxaa lagu dhawaaqi doonaa marka la soo bandhigo OnePlus 7
Raadi wax badan oo ku saabsan goorta aan ogaan doonno taariikhda rasmiga ah ee soo bandhigidda ee OnePlus 7 sida uu ku xaqiijiyay agaasimaheeda Twitter.
Sida dib loogu dajiyo taleefankaaga Huawei
Soo ogow fursadaha dib-u-dejinta kala duwan ee taleefanka casriga ah ee Huawei iyo sida looga heli karo.
ZTE Axon 10 Pro 5G ayaa ka sarreeya jaantusyada 'AnTuTu' mahadnaqid keydinta degdegga ah
Tartanka loogu talagalay taleefannada casriga ah ee ugu fiican ayaa ah mid aad u adag, waxaana laga yaabaa inaan dhowaan helno horyaal cusub ...
Dhammaan moobiillada Vivo waxay heli doonaan beta-ka dadweynaha ee Funtouch OS 9 bisha Luulyo
Vivo adeegsigeeda cusub ee adeegsadaha adeegsada, Funtouch OS 9, ayaa dhawaan laga heli doonaa aaladaha kala duwan ee 2018 shirkadda.
Shirkadda Xiaomi ayaa 5.000 oo dukaan ka furi doonta dalka India muddo sanad ah
Baro qorshayaasha Xiaomi ay ku furayaan ilaa 5.000 dukaan oo ku yaal Hindiya muddo sannad gudihiis ah si loo kordhiyo joogitaankooda suuqa.
Shaaciyey liiska taleefannada ku cusbooneysiin doona EMUI 9.1
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta EMUI 9.1, nooca cusub ee lakabka qaabeynta, kaas oo lagu sii deyn doono taleefannada shirkadda Shiinaha.
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa naqshadeynta Redmi S3 muuqaal ahaan
Redmi ayaa soo dhigtay fiidiyoow barteeda Twitter-ka ee Hindiya si ay u muujiso nashqadda rasmiga ah ee Redmi S3, taas oo u taagan faahfaahinno xiiso leh.
Kani waa Kaameerada OnePlus 7 Pro, midka xiga ee loo yaqaan 'OnePlus flagship' kaas oo la imaan doona qayb sawir leh oo la yaab leh. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan.
Sawirro cusub oo la soosaaray oo ah Pixel 3a iyo Pixel 3a XL ayaa iftiiminaya
Kahor hawlgalinta Google ee bartamaha dhexe ee Pixel 3a iyo 3a XL, qaabab cusub oo labada qalab ah ayaa ka soo muuqday khadka tooska ah. Halkan ka eeg!
Xogta Snapdragon 735 Speaks: Waxay u Keeni doontaa Taageerada Shabakadaha 5G illaa Mid-Range
Dhammaan qeexitaannada farsamo ee Qualcomm's Snapdragon 735 ayaa la xaday. Taageerada shabakadaha 5G iyo inbadan ayaa la kashifay.
Nokia 9 Pureview waxay heleysaa cusbooneysi bisha Abriil iyadoo la adeegsanayo balastarka amniga iyo horumarinno kala duwan
Nokia waxay sii deyneysaa cusbooneysiin cusub oo software ah oo loogu talagalay Nokia 9 Pureview oo leh dhowr astaamo oo cusub. Nooca "v4.22c" wuxuu ku saleysan yahay Android 9 Pie.
Huawei P30 Pro wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Raadi wax badan oo ku saabsan JerryRigEverything tijaabada adkeysiga ee caanka ah ee Huawei P30 Pro uu maro oo aad ogaato in ay ka gudubtay imtixaanka iyo in kale.
Xiaomi waxay soo saari doontaa laba kamaradood oo heer sare ah oo leh kamarado isdaba-joog ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha Xiaomi ee ah inay soo saaraan labadan taleefan ee heerka sare ah ee yeelan doona kamarad sawir leh, maadaama horay loo sii daayay
Meizu waxay ku diyaarinaysaa taleefankeedii ugu horreeyay ee casriga ah kamarad pop-up ah
Meizu wuxuu ka fikirayaa inuu soo saaro taleefan casri ah oo wata naqshad kamarad hore oo pop-up ah. Patent ayaa u muuqday si uu u caddeeyo.
Sifeeyay qiimaha OPPO Reno ee Yurub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qiimaha ay OPPO Reno ku yeelan doonto furitaankeeda Yurub, maadaama horeyba loogu faafiyey warbaahinta qaar.
Huawei Mate 20 X 5G wuxuu ka muuqanayaa khadka tooska ah iyo dhowr faahfaahintiisa
China Unicom ayaa shaaca ka qaaday sawirka Mate 20 X 5G oo muujinaya in muuqaalka terminalku uusan aad uga duwanayn muuqaalka nooca caadiga ah.
Meizu 16S wuxuu soo bandhigi doonaa dareeraha MP 48 oo leh OIS iyo in ka badan
Meizu wuxuu la wadaagay boodhadh internet ah oo Meizu 16S ah oo muujinaya aaladaha kamaradaha casriga ah iyo noocyadiisa kala duwan.
Xiaomi waxay xaqiijineysaa Redmi cusub oo aan heli doonin cusbooneysiinta Android Pie
Raadi wax badan oo ku saabsan ogeysiiska Xiaomi oo xaqiijinaya in seddex taleefan oo Redmi ah aan si rasmi ah loogu cusbooneysiin doonin Android Pie.
Motorola si ay u daahfuraan dhowr taleefano oo ay la socoto Android One dhowaan
Wax badan ka ogow qorshooyinka Motorola ee sanadkaan ay soo saari doonaan afar taleefan oo cusub oo u adeegsada Android One nidaamka qalliinka.
Master Lu wuxuu qiimeeyaa Honor 20, oo ah astaanta soo socota ee astaanta
Calanka 'Honor 20' ayaa lagu arkay barnaamijka 'Master Lu'. Liiska waxaa lagu faahfaahiyay magaca lambarka "YAL-AL00".
Madaxweyne kuxigeenka Lenovo Chang Cheng ayaa la wadaagay dhibcaha AnTutu ee Lenovo Z6 Pro isagoo adeegsanaya akoonkiisa Weibo.
OnePlus 3 iyo 3T waxay ku helaan Android 9 Pie Yurub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka beta-ka 'Pie beta' ee loogu talagalay OnePlus 3 iyo 3T Yurub, taas oo horay u bilaabatay is-beddel.
Fold Galaxy waa guul lagu xareeyay
Raadi wax badan oo ku saabsan guusha Galaxy Fold ee amarro hore oo sababay Samsung inay ku dhawaaqdo in la iibiyay mararka qaarkood.
Batariga 4000 mAh waa waxa Redmi Y3 yeelan doonaan [+ waraaqaha rasmiga ah]
Intii aad sugeysay Redmi Y3, barta Twitter-ka ee Redmi India waxay sii deysay laba teas oo cusub oo taleefanka casriga ah oo muujinaya batari dhan 4000 mAh.
Lenovo Z6 Pro wuxuu qaadi doonaa 100 sawir oo sawir ah mahadnaqa shaqada afartiisa kamaradood ee gadaal ah
Madaxweyne Ku Xigeenka iyo Maareeyaha Guud ee Shirkadda Macaamiisha ee Lenovo China ayaa wadaagay sawirro qaar ka mid ah astaamaha Lenovo Z6 Pro.
Mobiil kale oo lagu ciyaaro Fortnite: Redmi Note 7 Pro wuxuu heli doonaa taageero ciyaarta dhowaan
Redmi Note 7 Pro ayaa dhawaan awoodi doonta inay maamusho ciyaarta caanka ah ee royale dagaalka ee 'Epic Game', Fotnite, mahadnaqa Snapdragon 675 ee ay sidato.
Fold Galaxy wuxuu la kulmaa dhibaatooyin shaashadiisa
Ka ogow wax badan oo ku saabsan arrimaha shaashadda Galaxy Fold ee ay adeegsadayaasha isticmaala taleefanka qaarkood la kulmaan.
Galaxy A40s iyo Galaxy A60: Samsung-dhex dhexaad cusub
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy A40s iyo Galaxy A60, labada casriga casriga dhexe ee Samsung oo si rasmi ah loo soo bandhigay.
Maamulaha OnePlus wuxuu wadaagaa shaashad rasmi ah OnePlus 7
Maamulaha guud ee OnePlus, Pete Lau, ayaa la wadaagay shaxdii ugu horreysay ee rasmiga ah ee OnePlus 7. Midkani wuxuu leeyahay calanka cusub waa "Deg Deg iyo Hufnaan".
Telefoonada casriga ah ee ugufiican ee la bixiyo Maalinta Hooyada
Telefoonada casriga ah ee ugu wanaagsan ee la bixiyo Maalinta Hooyada. Soo ogow xulitaankan casriga ah si aad ugu iibsato Maalinta Hooyada 2019.
Xiaomi Mi 9 wuxuu helaa nooca beta-kii ugu dambeeyay 10.9.4.17 ee MIUI kaas oo ka ilaaliya haakariska
Xiaomi Mi 9 wuxuu helay casriyeyn cusub oo beta ah oo timaadda MIUI 10.9.4.17 waxayna ku dareysaa astaamaha qaar aaladda.
Galaxy S10 iyo S10 + ayaa ka iibiya Galaxy S10e
Thanks to Galaxy S10, shirkadda Kuuriya waxay awood u yeelatay inay si fudud u ilaaliso booska koowaad ee iibka Yurub oo dhan.
Jarmalka ayaa u oggolaan doona shirkadda Huawei inay dalka ka hirgeliso kaabayaasheeda 5G
Ugu dambeyntiina, Jarmalka ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegayo inuu u oggolaanayo shirkadda Huawei inay dalka ka dhisto kaabayaasheeda 5G.
Sony Xperia 1 ayaa la bilaabi doonaa dhammaadka bisha
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soosaarida Sony Xperia 1 oo ugu dambeyn imaan doonta Taiwan dhamaadka bisha sida ay shirkadda xaqiijisay.
Sanduuqa iibka iyo qeexitaannada buuxa ee Vivo Y17 waa la sifeeyey: muujiya kamaradeeda saddex-geesoodka ah iyo in ka badan
Vivo Y17 wuxuu u muuqday sidii halyeeyga gebi ahaanba daadinta faahfaahintiisa. Sawirka sanduuqa iibkiisa ayaa sidoo kale la muujiyay.
Samsung Galaxy Fold waxaa qiimeeyay Master Lu oo leh 3.0GB UFS 512 Memory flash xasuusta
Master Lu wuxuu sii daayay natiijada tijaabada ee bartilmaameedka Samsung Galaxy Fold smartphone foldable oo leh 3.0GB UFS 512 barnaamijkeeda.
Samsung Galaxy S10 5G wuxuu kujiraa sida mobilada leh qaybta sawirada ugufiican DxOMark oo ay weheliso Huawei P30 Pro
Shirkadda Samsung Galaxy S10 5G ayaa dib loo eegay DxOMark waxaana la dhigay meesha ugu sareysa ee qiimeynta iyadoo lala socdo Huawei P30 Pro.
Ereyga kama dambaysta ah: Huawei ma siin doonto Chipsets-kiisa 5G ee Apple
Shirkii Falanqeeyaha ee Huawei 2019, Huawei wuxuu meesha ka saaray in aysan la xiriirin Apple si ay u siiso Chipsets-kiisa 5G.
Kiniiniyada ugu fiican ee lagu xuso Maalinta Hooyada
5-ta May waa maalinta hooyada, waa maalin aan ku muujin karno jacaylka aan u qabno hooyadeen annagoo cunna mid ka mid ah kaniiniyada ugu fiican ee hadda laga heli karo Android
360 fiidiyow iyo qaabab cusub oo OnePlus 7 ah (nooca caadiga ah)
Kuwaan cusub ee la soo daabacay iyo 360 fiidyow ayaa si fiican u muujinaya qaabka caadiga ah ee OnePlus 7 oo la soo bandhigi doono bartamaha Maajo.
Ciyaaryahanka VLC wuxuu mar kale la jaan qaadayaa taleefannada casriga ah ee Huawei
Ciyaaryahanka warbaahinta ee VideoLAN ayaa markale lagaheli karaa iyada oo loo marayo Play Store dukaamada ugu casrisan ee Huawei.
Barnaamijyada HTC ee lagala baxay Play Store sabab uma ahan in shirkad dib loo soo celiyo
Soo-saaraha reer Taiwan ee HTC, waxay umuuqataa inaadan qorshe mustaqbal u laheyn inaad ka baxdo tartanka mobilada, in kasta oo aad barnaamijyada kala duwan kala noqotay Play Store.
Qeexitaanno kala duwan oo Redmi ah oo leh Snapdragon 730 iyo kamarad saddex-geesle ah ayaa soo muuqanaya
Sawir xaday iyo qeexitaannada muhiimka ah ee cusub iyo soo socda Redmi oo leh Snapdragon 730 ayaa soo ifbaxay dhowr saacadood ka hor.
Sharafta 20 taariikhda soo bandhigida ayaa shaaca laga qaaday
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee Honor 20 iyo 20 Pro oo horeyba si rasmi ah loogu xaqiijiyey saacadihii la soo dhaafay.
Haa, hadda waad iibsan kartaa Samsung Galaxy S10 iyo Galaxy S10 + oo leh qiimo dhimis dhan 220 euro
Marabtaa inaad iibsato Samsung Galaxy S10 mid ka raqiisan sidii hore? Hadda waxaad ka faa'iideysan kartaa dalabyada Amazon si aad ugu iibsato qiimaha ugu fiican
Xiaomi Mi AirDots Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista Xiaomi Mi AirDots Pro si rasmi ah Spain, halkaas oo horeyba looga iibsan karo dukaamada qaarkood.
Taariikhda bilaabida ee Redmi ee leh Snapdragon 855 waxaa soo jeediyay Lu Weibing
Qoraal cusub oo Weibo ah oo ka yimid Maareeyaha Guud ee Redmi Lu Weibing ayaa soo jeediyay in imaatinka Redmi ee Snapdragon 855 uusan noqon doonin mid aad uga dambeeya.
Google wuxuu ku dhawaaqayaa wax cusub inuu imanayo Maajo 7: waxay noqon kartaa Pixel 3a duo
Google waxay xaqiijineysaa inay wax cusub soo socdaan 7-da Maajo. Waxaa jira fikrad ah in tani ay tahay soo saarista Pixel 3a iyo Pixel 3a XL ee soo socota.
Maamuus 20i: Nooca cusub ee nooca dhexe ee dhexdhexaadka ah
Soo ogow qeexitaannada 'Honor 20i', taleefanka cusub ee khadka dhexe ee dhexdhexaadka ah ee laga helo nooca Shiinaha ee ku dhaca dukaamada toddobaadkan.
Galaxy A2 Core: Samsung-ka cusub ee wata 'Android Go'
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Galaxy A2 Core, Samsung oo ah taleefan casri ah oo dhammaadkiisu hooseeyo oo durba si rasmi ah loogu soo bandhigay Hindiya.
Microsoft waxay dooneysaa inay la istaagto AirPods 2 oo ay leedahay sameecado wireless ah oo u gaar ah
Microsoft waxay ka shaqeyneysaa qaar ka mid ah sameecadaha madaxa banaan ee cusub iyo kuwa madaxa banaan oo ay kula tartami karaan AirPods 2. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta oo dhan.
Samsung Galaxy Fold wuxuu horey u leeyahay xayeysiis TV u gaar ah
Fold Galaxy waxaa lagu soo bandhigay iyada oo lala kaashanayo ganacsigiisii ​​ugu horreeyay. Samsung oo gabi ahaanba la socota qalabyo kala duwan.
Qiimaha Google Pixel 3a iyo Pixel 3a XL ee Kanada waa la sifeeyey. Iibsashadaadu ma u qalantaa?
Qiimaha suurtagalka ah ee Google Pixel 3a iyo Pixel 3a XL ayaa la daadiyay. Tixgelinta astaamaheeda, ma u qalantaa iibsigaaga?
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa Redmi cusub usbuuca soo socda
Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida Xiaomi Redmi Y3 oo si rasmi ah u dhici doonta Abriil 24, sida horeyba loo xaqiijiyay.
DxOMark wuxuu dhaliyaa kamaradda hore ee Huawei P30 Pro
DxOMark waxay tijaabisay oo ay qiimeysay dareeraha kaamerada hore ee Huawei P30 Pro. Raadi sida ugu wanaagsan ee ay ku sameysay tijaabooyinka!
Samsung waxay diyaarisaa Galaxy M40: heerka dhexe wuxuu helay shahaadada Wi-Fi Alliance
Dareerkii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy M40 ayaa soo ifbaxaya, oo ah nooc fiitamiin badan leh oo ku saabsan kaas oo Wi-Fi Alliance uu shaaca ka qaaday faahfaahinta qaar.
Realme 3 Pro kamaradda habeenkii ayaa muujineysa awooddeeda sawir leh
Kahor furitaanka Realme 3 Pro, Maamulaha guud ee shirkadu wuxuu la wadaagay muunad kamaradii habeenki dhexe.
ZTE wuxuu xaqiijiyay in iibinta Axon 10 Pro 5G ay bilaaban doonto wixii ka dambeeya 1da May halkaas. Qiimaheeda lama shaacin, laakiin waa la ogaan doonaa dhawaan.
Raadi wax badan oo ku saabsan jagada Samsung ee suuqa, taas oo agaasimaha guud ee shirkaddu sheegay inuu sii joogi doono mustaqbalka.
Soo ogow taariikhda bandhigga ee OnePlus 7 oo horeyba loo sii daayay saacadihii la soo dhaafay oo xaqiiji goorta aan filayno taleefanka.
Meizu 16S waxaa si rasmi ah loo sameyn doonaa 23-ka Abriil ee soo socota
Websaytka Meizu Jingdong Mall ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay, taariikhda la bilaabayo ee Meizu 16S waxay ku qoran tahay Abriil 23.
Muxuu Huawei u muujin waayey dhibcaha DxOMark ee P30?
Mid ka mid ah howl wadeenada shirkadda Huawei ayaa shaaca ka qaaday sababta ay shirkaddu u sii deyn weyday dhibcaha DxOMark ee shirkadda Huawei P30.
Google iyo Huawei waxay ku heshiiyeen inay bixiyaan illaa $ 400 milkiilayaasha cilladaha Nexus 6Ps
Isticmaalayaasha cilladaha Google Nexus 6Ps ee ka qayb qaatay dacwadda hadda socota waxay heli karaan ilaa $ 400 oo magdhow ah oo ay ka helaan Google iyo Huawei.
Shakhsiyan shakhsiyeey Galaxy S10 oo leh sawir-qaadayaashan
Haddii aad rabto inaad ku ballaadhiso tirada waraaqaha ee Galaxy S10, S10e ama S10 + adigoon sii marin dukaanka Samsung, halkan waxaa ku yaal waxyaabo kale oo bilaash ah.
Geekbench wuxuu xaqiijinayaa in Realme 3 Pro uu la imaan doono Snapdragon 710
Waxay soo baxday in wararka xanta ah ay run yihiin: Realme 3 Pro waxay la imaan doontaa processor Snapdragon 710, sidaasna Geekbench ayaa xaqiijiyay.
Maamuuska 8S ee xaday wuxuu siiyaa isboorti gadaal labanlaaban
Honor 8S waa taleefan soo socda oo dhex-dhexaad hoose ah. Qeexitaannadiisa iyo qaab bixintooda ayaa hadda soo ifbaxay. Kuwa dambe waxay muujinayaan qoraal laba-laab ah.
OPPO waxay joojisaa taleefannada kala duwan ee R
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan tirtiridda taleefannada kala duwan ee OPPO R, oo matalaya isbeddelka istiraatiijiyadeed ee soo saaraha Shiinaha.
Miyuu OnePlus qorsheynayaa inuu soo saaro taleefan casri ah oo la laaban karo?
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka la sheegay ee OnePlus ee ah in la soo saaro taleefan casri ah oo la laaban karo, kaas oo agaasimaha guud ee shirkaddu uu faallo ka bixiyay wareysiga.
Samsung Galaxy J7 wuxuu helayaa cusbooneysiinta amniga Abriil
Qeybta amniga ee u dhiganta bisha Abriil ee Samsung Galaxy J7 / J7 Pro hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo, laga bilaabo Ruushka.
Magic UI 2.1 wuxuu dhaqangelin doonaa GPU Turbo 3.0 iyo in ka badan si loo sharfo V20 iyo Magic 2 dhowaan
Honor V20 iyo Magic 2 waxay wadaan Magic UI 2.0 oo maahan EMUI. Inkasta oo ay tani isbeddelayso, isla markaaba waxay helayaan Magic UI 2.1, iyo GPU Turbo 3.0 iyo in ka badan.
Si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay: Lenovo Z6 Pro wuxuu noqon doonaa mobilada 5G
Horumar cusub, fulinta Lenovo ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in Lenovo Z6 Pro uu taageeri doono isku xirnaanta 5G.
Taxanaha Huawei Mate 20 wuxuu helaa EMUI 9.1 beta oo leh dhowr horumarin
Noocii ugu dambeeyay ee beta ee EMUI 9.1 ayaa hadda loo heli karaa dhammaan taxanaha sare ee Huawei Mate 20. Waxay la timid dhowr horumar.
Laba mobiles oo cusub oo Samsung ah oo wata saddex kamaradood oo gadaal ah iyo baytariyaal waaweyn ayaan weli iman
Laba taleefan cusub oo Samsung ah ayaa shahaado ka heshay wakaaladda Shiinaha ee TENAA. Labaduba waxay qalabayn doonaan kamarad gadaal seddex laab ah iyo baytariyada waaweyn.
Immisa ayey ku kacaysaa hagaajinta shaashadda Galaxy S10?
Waxbadan ka ogow kharashka dayactirka shaashadda Galaxy S10, sida ay xaqiijisay shirkadda Samsung ee dalka Mareykanka.
Meizu 16S wuxuu adeegsan doonaa cod-weyneeye HIFI-ga oo qafiifiya isla markaana iska tuuraa xarka 3.5mm
Meizu waxay durbaba diyaarinaysaa inay soo bandhigto calankeeda xiga, oo aan cid kale ahayn Meizu 16S. Midkani wuxuu waayi lahaa maqal maqalkiisu yahay 3.5mm.
Taleefanka casriga ah ee Black Shark ee soo socda ayaa soo kaban doona jaakadda 3.5 mm
Mid ka mid ah isbeddelada ugu caansan ee lagu sameeyay Black Shark 2 nashqadiisu waxay ahayd ka saarida maqalka codka ee '3.5mm'. Tani waxay ku laaban laheyd bedelkeeda.
Samsung ayaa soo cusbooneysiisay cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay dareeraha faraha ee Galaxy S10
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta cusub ee la bilaabay si loo hagaajiyo waxqabadka dareeraha faraha ee Samsung Galaxy S10.
HTC waxay siisaa shaybaarro nololeed waxayna diiwaangelisaa nooc dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo ku yaal AnTuTu
Nooc cusub oo ka socda shirkadda HTC ayaa soo socota. Midkaan ayaa lagu soo bandhigay bogga Weibo ee AnTuTu, isagoo soo bandhigaya qaar ka mid ah tusaalooyinka iyo buundada uu leeyahay.
Samsung waxay dhawaan daahfuri doontaa habka habeenka kamaradda Galaxy S10
Cusbooneysiinta qalabka kumbuyuutarka ee Abriil ama Maajo, cusbooneysiinta kamaraddu waxay ku imaan doontaa hab gaar ah oo habeenkii ah iyo cusbooneysiinta algorithm.
Huawei P30 waxaa lagu iibiyaa 10 ilbidhiqsi gudaha Shiinaha
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan guusha Huawei P30 ee iibkeeda tooska ah ee Shiinaha, halkaas oo ay ku iibisay kaliya 10 ilbidhiqsi oo iib ah.
Maamuus 8A Pro: Nooca cusub ee fiitamiinada Play 8A ee lagu baarayo sawirka faraha
The Honor Play 8A waxaa la bilaabay Janaayo. Waxaa loo sheegay inuu yahay tartanka Xiaomi Mi Play tan iyo labadaba ...
Galaxy S10 5G wuxuu leeyahay xoogaa dhibaato xagga waxqabadka ah
Waxbadan ka ogow arrimaha isku xirnaanta ee Galaxy S10 5G uu kala kulmayo Kuuriyada Koonfureed tan iyo markii la bilaabay usbuucii hore.
LG wuxuu rukhsad u leeyahay taleefanka gacanta ee isku laaban
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan patent-ka LG kaas oo aan ku arki karno taleefan casri ah oo laaban karo oo hufan oo ka shaqeeya labada dhinac.
Snapdragon 865 wuxuu la imaan doonaa taageero LPDDR5 RAM
Qualcomm wuxuu bilaabay shaqadiisa Chipset-kiisa soo socda, kaas oo la filayo in loogu yeero Snapdragon 865. Tani waxay la jaan qaadi doontaa LPDDR5 RAM.
Realme 3 Pro ayaa la bilaabi doonaa 22-ka Abriil si rasmi ah
Teaser cusub ayaa muujineysa in shirkaddu ay qaban doonto munaasabad lagu soo bandhigayo Realme 3 Pro oo ku taal Hindiya Abriil 22.
Sharp wuxuu horey u muujiyey naqshadda taleefanka gacanta ee isku laaban
Soo ogow naqshadda taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Sharp' ee ugu horreeya ee isku laaban, kaas oo si toos ah loogu arkay sida shirkadda lafteedu mar horeba muujisay
Samsung Galaxy A40 iyo A70 ayaa yimid Spain
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilowga rasmiga ah ee Galaxy A40 iyo Galaxy A70 ee Spain, sida rasmiga ah ay ugu dhawaaqday Samsung.
Android Pie ayaa hadda loo heli karaa Galaxy Tab S4
Kiniinka ugu awoodda badan Samsung ayaa hadda bilaabay helitaanka Android Pie. Waxaan ka hadlaynaa Galaxy Tab S4
Huawei Y5 laga bilaabo 2019, wuxuu sifeeyay astaamaha taleefanka cusub ee raqiiska ah ee Huawei
Qunsulka Google waxaan ku xaqiijin karnaa qeyb weyn oo ka mid ah astaamaha Huawei Y5 ee 2019, taleefanka cusub ee raqiiska ah ee Huawei.
Galaxy J6 wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo Android Pie
Terminal-ka cusub ee Samsung ee bilaabay inuu helo casriyeynta la filayo ee loo yaqaan 'Android Pie' waa Samsung Galaxy J6
Nidaamyada ugu-waxqabadka wanaagsan ee loogu talagalay taleefannada casriga ah, waxaa qoray Master Lu
Kooxda heerka koowaad ee Shiinaha ee Master Lu waxay soo saartay liistada processor-rada ugu wanaagsan ee mobilada ee Q2019 XNUMX.
Oppo Reno 5G oo leh Snapdragon 855 ayaa ka dhalaalaya AnTuTu
AnTuTu waxay soo saartay dhibcaha benchmark ee Oppo Reno 5G oo leh Snapdragon 855, oo hadda rasmi noqday.
Redmi Y3 wuu soo socdaa dhawaan, wuxuuna ku sameyn doonaa kamarad 32 MP ah
Manu Kumar Jain ayaa shaaca ka qaaday in taleefanka cusub ee Redmi uu imanayo. Waa Redmi Y3, mobiil la imaan doona kamarad hore oo 32 MP ah.
Ciyaartii Moto G7 ayaa si rasmi ah u timid Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka Moto G7 Play ee Spain, taas oo ka dhigaysa dhammaan baaxadda rasmiga ah ee la heli karo iibsashada.
Maamulaha OnePlus wuxuu leeyahay Noocyada Midabbada Midabbada Crystal Gradient Si Fiican Ha U Iibin
Pete Lau wuxuu leeyahay qaab kale oo uu wax ku eego. Wuxuu leeyahay noocyada muraayadaha midabada raaxada leh si wanaagsan ugama iibin suuqa.
Lenovo Z6 Pro wuxuu imaan doonaa Abriil 23 iyada oo lala kaashanayo astaanta ciyaaraha Legion
Lenovo ayaa maanta xaqiijisay in shirkadiisa Z6 Pro ay ka bilaaban doonto Abriil 23 magaalada Beijing, Shiinaha. Tani waxay hoos imaaneysaa xiriirka magaca Legion ciyaaraha.
OnePlus 7 wuxuu horey u lahaa taariikh bandhig
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee aan ka filan karno midkan OnePlus 7 inuu haysto maadaama horeyba looga shaaciyey warbaahin kala duwan.
ASUS Zenfone Max iyo Max Pro cusbooneysiinta ku saabsan Android Pie
Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' oo hadda si rasmi ah loogu sii daayay ASUS Zenfone Max iyo Max Pro adduunka oo dhan.
Fiidiyowgu wuxuu u muuqdaa inuu muujinayo astaanta la filayo Redmi Pro 2 oo leh Snapdragon 855
Muuqaal la sheegay in taleefanka laga soo duubay ayaa soo shaac baxay oo qaarkood ay ku calaamadiyeen "Redmi Pro 2". Waxaan ku tusaynaa hoos.
Shaandheeyay fiidiyow cusub oo aad ku arki karto hawlgalka Galaxy Fold
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida loo yaqaan 'Galaxy Fold' uu uga shaqeeyo fiidiyowgaan oo aad ka arki karto sida loo isticmaalo taleefanka Samsung.
Galaxy A20e: Samsung noocyadeeda heerka gelitaanka cusub
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Galaxy A20e, taleefanka cusub ee Samsung ee heerka gelitaanka oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay munaasabad.
Samsung Galaxy A80: Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh kamarad wareegaysa
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy A80, Samsung oo ah taleefanka casriga ee cusub ee dhexdhexaadka ah oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
OPPO Reno 5G: Nooc cusub oo heer sare ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan OPPO Reno 5G, casriga cusub ee casriga ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
OPPO Reno: Taleefanka casriga ee cusub ayaa rasmi ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan OPPO Reno, oo ah nooca casriga ah ee nooca dhexe ee casriga ah, oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Kalabar dadka isticmaala ee doorta Pixel 3 waxay ka yimaadeen Samsung
Google Pixel 3 wuxuu maareynayaa inuu soo jiito isticmaaleyaal badan oo Samsung ah marka loo eego Apple, in kasta oo ujeeddadii ugu horreysay ay ahayd tan dambe.
Fikradan ayaa ina tusaysa sida uu noqon doono taleefanka isku laaban ee Motorola
Waxaan ku tusineynaa muuqaal fiidiyoow ah oo noo ogolaanaya inaan ka helno fikrad ah qaabka naqshada taleefanka isku laaban ee Motorola uu noqon doono. Wuu guuleysan doonaa?
Qiimaha taleefannada casriga ah ee laabma ayaa hoos u dhici doona sannadka 2021
Ka ogow wax badan oo ku saabsan isbeddelka qiimaha taleefannada casriga ah, kaas oo la filayo inuu hoos ugu dhaco qiimaha sannadka 2021.
OnePlus 7 Pro ayaa ku daatay sawirro dhab ah oo muujinaya shaashadda qalooca ee OLED iyo qeexitaankeeda
us-7 Laba sawir oo xaday oo ah noocyada ugu horumarsan ee casriga casriga ah ee soo socda ee OnePlus 7 ayaa ka soo muuqday Weibo oo na siineysa…
Kala duwanaanshaha Galaxy J wuu baaba'ayaa si loogu banneeyo Galaxy A
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka kala duwanaanshaha Samsung Galaxy J, oo horeyba looga takhalusay oo ugu oggolaanaya Galaxy A qaab rasmi ah.
Huawei wuxuu diyaar u yahay inuu Apple ka iibiyo Chipset-kiisa 5G Balong 5000
Warbixin cusub ayaa soo ifbaxday iyadoo soo jeedinaysa in shirkadda Huawei ay u furan tahay inay Apple siiso modemkeeda 5G, Balong 5000.
Jaangooyooyinkani waxay xaqiijinayaan qayb ka mid ah astaamaha Samsung Galaxy A80
Si tartiib tartiib ah ayaan u ogaaneynaa dhammaan faahfaahinta qoyska cusub ee soo saaraha Kuuriya. Maanta, Samsung ayaa ku dhawaaqday ...
Meizu 16S: waa sida shaashadda oo dhami ku imaan doonto kamarad 48 MP ah iyo SD855
Maamulaha Meizu wuxuu wadaagey qaab rasmi ah oo ah Meizu 16S naqshad heer sare ah oo ku jirta nooc midab cad.
LG K40 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka LG K40 si rasmi ah Spain, halkaas oo ay awalba suurtagal ahayd in laga iibsado taleefanka sumadda leh.
ASUS ROG Telefoonka 2 ayaa la bilaabi lahaa rubuca saddexaad
Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka 'ASUS ROG Phone 2', oo ay tahay inuu dhaco xagaagan inkasta oo lagu soo bandhigi doono oo keliya Shiinaha.
Elephone U Pro oo loo soo bandhigo waqti xaddidan
Elephone U Pro waxaa lagu iibiyaa qiimo aan laga adkaan karin laakiin waa waqti xaddidan. Soo qaado taleefanka casriga ah ee "top" ah oo laga dhimo qiimo dhan 28%.
Galaxy J8 wuxuu bilaabaa inuu helo Android Pie
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa hadda soo saartay casriyeynta 'Android Pie' ee Samsung Galaxy J8
Huawei waxay si qalad ah u muujineysaa bilawga Mate X
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda la sii deyn karo ee Huawei Mate X, kaas oo si qarsoodi ah loogu daadiyay websaydhka shirkadda ee Huawei dhammaadka toddobaadkan.
Huawei waxay leedahay rajo weyn oo taxane ah P30: diyaarinta 6 milyan oo unug oo loogu talagalay suuqa adduunka
Huawei wuxuu dhawaan bilaabay taxanaha cusub ee 'P30', oo ka kooban laba taleefan oo heer sare ah, oo lagu daray ...
Nokia 9 PureView waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka Nokia 9 PureView ee Spain, halkaas oo aad horey uga iibsan kartid si rasmi ah maanta.
Kala shaandheeyay faahfaahinta ugu horreysa ee ku saabsan Honor 20 iyo 20 Pro
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Honor 20 iyo Honor 20 Pro, casriga casriga ah ee cusub. Sooc-soocyada, qiimaha iyo taariikhda la siidaayo.
Cusboonaysiinta OnePlus 3 iyo 3T ee loo yaqaan 'Android Pie' ee Shiinaha
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qalabka 'Android Pie beta' oo si rasmi ah loogu bilaabay OnePlus 3 iyo 3T ee Shiinaha dhawaana yimaadda Yurub
Fold Galaxy ayaa sidoo kale laga bilaabi doonaa Shiinaha
Waxbadan ka ogow qorshooyinka Samsung ee ah inay si rasmi ah Shiinaha ugu soo bandhigaan Galaxy Fold bilaha soo socda.
BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro waa la cusbooneysiiyay Android Pie
Raadi wax badan oo ku saabsan sii deynta cusbooneysiinta ee loo yaqaan 'Android Pie' ee loogu talagalay BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro oo horeyba marin ugu lahaa si rasmi ah.
Jawaabta Google ee iPhone Touch ee 3D waxay ka iman doontaa gacanta Android Q
Teknolojiyada 3D Touch waxay ku dhowdahay inay ku gaadho Android gacanta qaybta xigta ee nidaamka hawlgalka moobiilka ee Google
Galaxy A50 waa la cusbooneysiiyay si loo hagaajiyo dareeraha faraha
Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ay Samsung sii deysay si loo hagaajiyo waxqabadka dareeraha faraha ee Galaxy A50.
Redmi-dhamaadka-sare ma lahaan doono kamarad lagalaaban karo
Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta agaasimaha guud ee Redmi taleefankeeda sare, kaas oo yeelan doona naqshad ka duwan sidii la filayay.
Shaaciyey taariikhda bandhigga ee OPPO Reno ee Yurub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda ay OPPO Reno la doonayo in si rasmi ah loogu soo bandhigo Yurub, sida horayba loo xaqiijiyay.
Heerka Xiaomi Mi 9 waa iibiyaha ugu fiican
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan iibka wanaagsan ee nooca Xiaomi Mi 9 ku haysto waqtigiisa iibka suuqa toddobaadyadan.
LG waxay xaqiijineysaa goorta Android Pie ay heli doonto dhamaadka-dhamaadka
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhaha ay LG ku soo bandhigi doonto cusbooneysiinta Android Pie illaa heerkeedu sarreeyo sida ay horeyba u xaqiijiyeen si rasmi ah.
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa dhamaadka taageerada dhowr taleefanadeeda
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka taageerada ay Xiaomi siiso dhowr ka mid ah taleefannada casriga ah ee ku dhex jira xadka Redmi, horeyba si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Google Pixel 3a iyo 3a XL
Raadi wax badan oo ku saabsan qeexitaannada ugu horreeya ee Google Pixel 3a iyo 3a XL oo horeyba si rasmi ah loogu faafiyey saacadihii la soo dhaafay.
Waxaan horey u ogaanay qiimaha Galaxy S10 5G
Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha noocyadan taleefanka Samsung ay ku leeyihiin bilowgeeda Koonfurta Kuuriya. Qiimaha Galaxy S10 5G.
Faafaahin cusub ka daatay Galaxy A90
Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee qarsoon ee Samsung Galaxy A90 ee la filayo toddobaadka soo socda
Huawei wuxuu xaqiijinayaa in sanadka 2019 ay noqon doonto soo saaraha ugu weyn ee taleefannada casriga ah ee adduunka
Sida laga soo xigtay Agaasimaha Guud ee Huawei, 2019, waxay noqon doontaa, oo ay weheliso HONOR, soo saaraha ugu weyn ee taleefannada casriga ah ee adduunka.
Amazon waxay diyaarsataa samaacado sameecado leh oo leh Alexa si ay ula tartanto Apple's AirPods
Amazon waxay mar horeba ka shaqeyneysaa aalado gaara oo wireless ah oo la shaqeyn doona Alexa si ay ula tartamaan AriPods 2.
Motorola P40 Play, tani waxay noqon doontaa nashqadaynta taleefanka cusub ee raqiiska ah ee shirkadda
Waxaan ku tuseynaa dhammaan faahfaahinta naqshadeynta Motorola P40 Play, oo ku soo muuqday turjumaadyo, iyo sidoo kale fiidiyoow wax yar uun ka tagaya mala awaalka.
Samsung waxay bilaabaysaa soosaaradeeda 5G Chipsets
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilowga soo saarista moodeelkooda 5G ee ay Samsung horayba si rasmi ah ugu bilaabatay sida ay sheegeen.
VIVO V1901A ayaa ka muuqata TENNA oo muujineysa qaabkeeda iyo qeyb ka mid ah astaamaha
Qaar ka mid ah astaamaha ayaa la daadiyay, marka lagu daro nashqadda VIVO V1901A, oo ah aalad u istaagi doonta nidaamkeeda kamarad saddex-laab ah.
Motorola waxay ku shaqeysaa taleefan iyada oo qaab cusub loo cusbooneysiiyay
Motorola waxay ka shaqeyneysaa taleefan gacmeed cusub oo u istaagi lahaa bixinta naqshad gebi ahaanba la cusbooneysiiyay. Waxaan ku tuseynaa dhammaan faahfaahinta, waxaa jira fiidiyoow!
OPPO waxay ku muujineysaa qiimaha Reno boggeeda internetka
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qiimaha ay yeelan doonto OPPO Reno, sida lagu arkay bogga sumadda Shiinaha saacadihii la soo dhaafay.
Lagu sifeeyay naqshadda Galaxy A90 ee fiidiyowga ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan fiidiyowgan laga soo daayay Galaxy A90 kaas oo noo ogolaanaya inaan aragno naqshadda uu yeelan doono Samsung bartanka-dhexe.
Shaandheeyey Redmi Pro 2 oo loo malaynayo nooca Shiinaha
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Redmi Pro 2, taleefankii ugu horreeyay ee summad sare leh, oo nashqadeyntiisa iyo qeexitaankiisa koowaadba horey loo sii daayay.
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa qaar ka mid ah astaamaha MIUI 11
Soo ogow qaar ka mid ah astaamaha cusub ee ay Xiaomi xaqiijisay in MIUI 11 si rasmi ah loo soo bandhigi doono bartamaha sanadkan.
Sony Xperia XA2 wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee bilaabaya in si rasmi ah loogu soo rogo Sony Xperia XA2 dalalka qaarkood.
OPPO way ka dheregsan tahay xatooyada: in ka badan 50.000 euro oo ganaax ah shaqaalaha u gudbiya macluumaadka
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee qaybta taleefanka ayaa ah xaddiga badan ee daadadka aan ka helno ...
Tusaalooyin sawir ah oo kamaradda OPPO Reno ah ayaa muujinaya awoodda cajiibka ah ee ay leedahay habeenkii
Tusaalooyinka ugu horreeya ee sawir qaadista ah ee lala qaado kamaradda OPPO Reno ayaa la daabacay natiijooyinka ka soo baxa habka habeenkii waa kuwo cajiib ah.
Dhammaan faahfaahinta naqshadeynta OnePlus 7 ayaa la muujiyay. Kaamiradaadu way kula yaabi doontaa!
Maaha markii ugu horeysay ee aan aragno naqshadda suurtagalka ah ee OnePlus 7. Ilaa hadda, waxaan filaynay moodel leh ...
Xiaomi waxay horey u iibisay in kabadan 4 milyan oo Redmi Note 7 ah
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka wanaagsan ee Redmi Note 7 uu haystay ka dib seddex bilood oo kaliya suuqa, sida ay xaqiijisay Xiaomi lafteeda.
LG V50 ThinQ 5G qiimaha iyo bilaabida ayaa lagu xaqiijiyay Kuuriya
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha iyo taariikhda la bilaabayo LG V50 ee Kuuriyada Koonfureed iyada oo shirkadda lafteedu mar horeba si rasmi ah u xaqiijisay.
Soo dejiso waraaqaha waraaqaha ee Huawei P30
Wargeysyada cusub ee Huawei P30 iyo P30 Pro ayaa hadda laga soo dejisan karaa qodobkan ku jira Androidsis
Xiaomi Mi Band 3 wuxuu gaarayaa hal milyan oo unug oo laga iibiyay Hindiya
Raadi wax badan oo ku saabsan guusha Xiaomi Mi Band 3 ee suuqa Hindiya, halkaas oo ay horey u iibisay hal milyan oo unug lix bilood gudahood.
Qiimaha Nubia Alpha ayaa shaaca ka qaaday
Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha noocyada kala duwan ee Nubia Alpha, kuwaas oo horeyba si rasmi ah loo xaqiijiyey.
Nokia X71: Nooca cusub ee bartamaha
Raadi wax walba oo ku saabsan Nokia X71, oo ah nooca casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee nooca si rasmi ah loogu soo bandhigo dhacdo ka dhacday Shiinaha
Poptel V9: taleefan casri ah oo loogu talagalay guriga oo leh shaqooyin badan
Haddii aad raadineyso taleefanka gurigaaga oo leh waxyaabo badan oo muuqaal ah, Poptel V9 wuxuu noqon karaa taleefanka casriga ah ee aad raadineyso.
Dukaanka rasmiga ah ee Google wuxuu joojiyaa iibinta Pixel 2 iyo Pixel 2 XL
Google ayaa si rasmi ah u joojisay iibinta Google Pixel 2 iyo Pixel 2 XL, lix bilood ka dib markii ay soo bandhigtay jiilka saddexaad ee noocani.
Nubia Alpha ayaa suuqa soo gali doonta Isniintaan
Ka ogow wax badan oo ku saabsan soosaarka shirkadda Shiinaha ee Nubia Alpha oo si rasmi ah looga bilaabi doono Shiinaha Isniintaan.
Redmi 7 wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Raadi wax badan oo ku saabsan soosaarida Xiaomi's Redmi 7 si rasmi ah Spain gudaheeda sida horayba loogu xaqiijiyay astaanta Shiinaha.
LG K12 +: Nooca casriga ah ee casriga ah ee nooca casriga ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan LG K12 +, taleefanka nooca soo-gelinta ee cusub, oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Xiaomi wuxuu shatiyeeyay taleefan leh darajo xagga hoose
Raadi wax badan oo ku saabsan patent-ka cusub ee Xiaomi, oo soo bandhigaya qaanuunka hoose ee shaashadda taleefanka casriga ah.
Daahfurka Razer Phone 3 ayaa dib loo dhigi lahaa ilaa 2020
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka jiilka saddexaad ee Razer Phone oo si rasmi ah dib ugu dhacay ilaa sanadka 2020 sida uu sheegay agaasimaha guud.
TAG Heuer wuxuu ku xiran yahay 45 "Golf Edition": smartwatch cusub oo raaxo leh
Raadi wax walba oo ku saabsan TAG Heuer oo ku xiran 45 "Golf Edition", nooca casriga ah ee casriga ah ee horay loogu soo bandhigay.
EMUI 9.1 waxay soo bandhigi doontaa GPU Turbo 3.0: kuwani waxay noqon doonaan ciyaaraha ka faa'iideysan doona tikniyoolajiyadan
Huawei wuxuu ku dhawaaqay in GPU Turbo 3.0, aaladda kor u qaadista waxqabadka ciyaarta, ay imaaneyso Huawei P30 iyo Huawei P30 Pro si dhakhso leh.
Google Pixel 3a wuu ka dhowyahay abid: Google wuxuu tilmaamayaa bilaabashadeeda dhow
Madaxweyne ku xigeenka Android ee Google ayaa durbaba tijaabinaya Pixel 3a ama Pixel 3a XL wuxuuna bilaabay inuu soo bandhigo kaamirada. Daahfurka dhow
Samsung waxay sharraxeysaa sida ay u doorteen midabada Galaxy S10
Raadi wax badan oo ku saabsan sida Samsung u dooratay gamut gamut oo ugu dambeyntii loo isticmaalay Galaxy S10 sanadkaan.
Meizu 16S wuxuu socod ku marayaa Geekbench wuxuuna na siinayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa noo diyaarsan
Meizu 16s wuxuu ahaa mowduuc aad u kulul bishii la soo dhaafay, maaddaama sawirradii ugu horreeyay ee tooska ahi ay muuqdeen ...
HTC waxay soo saari kartaa taleefan casri ah oo 5G ah sannadkan
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha HTC ee ah inay soo saaraan taleefan casri ah 5G sannadkan kaas oo aan hore wax uga ogaanay.
Faafaahin cusub ka bixisay Nokia 6.2
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan daadinta ugu horreysa ee ku saabsan tilmaamaha Nokia 6.2 ee la filayo inuu si rasmi ah suuqa u soo galo muddo yar ka dib.
Kaamirada hore ee Galaxy S10 ma muujineyso quruxdeeda ugu sareysa codsiyada qeybta saddexaad
Waxaa la soo sheegay in kaamerada hore ee Samsung Galaxy S10 loo isticmaali karo oo kaliya qaab gooyn ah, halkii laga isticmaali lahaa muuqaalka buuxa.
LG G8 ThinQ ayaa lagu iibin doonaa Mareykanka laga bilaabo Abriil 11: amarada horay loo sii siiyay ayaa horeyba loo bilaabay
LG waxay hadda shaacisay in taleefankeeda cusub ee waxqabadka sare leh, LG G8 ThinQ, laga heli doono bisha Abriil 11 ee dalka Mareykanka.
10% Smart TV-yada waxay adeegsadaan TV-ga Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan saamiga suuqa ee TV-ga Android uu hadda haysto iyo waxa ka dhigaya nooc loo adeegsaday suuqa Smart TV.
Dhibcaha 'Master Lu benchmark' Oppo Reno oo leh Snapdragon 855 iyo 8GB oo RAM ah
Heerka 'Master Lu benchmark' ayaa diiwaangeliyey oo dhaliyey dhamaadka-sare ee Oppo Reno oo ay la socdaan Snapdragon 855 iyo 8 GB oo RAM ah oo ku yaal barxaddeeda.
Xiaomi wuxuu ku laaban doonaa Brazil: markan, oo leh xoog badan
Toban sano ka hor, Xiaomi wuxuu bilaabay sameynta taleefannada casriga ee Brazil, laakiin ugu dambeyn wuxuu ka tagay suuqa 2016. Hadda wey soo laaban kartaa.
Huawei waxay jabisay dakhligeeda 2018 iyo dakhliga faaiidada
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dakhliga iyo tirooyinka faa iidada ee Huawei, oo lahaa 2018 wanaagsan adduunka oo dhan sida aan hadda baranay.
Nubia Red Magic 3 waxay muujineysaa tayadeeda Master Lu
Nubia Red Magic 3 waxay soo martay heerka loo yaqaan 'Master Lu benchmark' oo ay la socoto Snapdragon 855. Qaybta la tijaabiyay waxaa lagu arkay 8GB oo RAM ah.
Sony waxay ku darsameysaa qeybteeda mobilada kamaradaha, TV-ga iyo maqalka
Sony waxay shaacisay inay isku darayso qaybteeda mobilada kamaradaha, TV-ga iyo qeybaha maqalka. Tan waxaa loogu yeeri doonaa 'Alaabada elektaroniga ah iyo xalka'.
Kaamirada pop-up-ka iyo saddexda gadaal ee OnePlus 7 ayaa mar kale ifaya mahadnaqooda guryaha
Erayo cusub oo ka mid ah OnePlus 7 ayaa soo muuqday, laakiin guryahooda, kuwaas oo muujinaya kamaradeeda sedex geesoodka ah iyo dareeraha soo-baxa ee sawirada.
Black Shark 2: qiimaha iyo helitaanka Spain
Telefoonka casriga ah ee loo yaqaan 'Razer Phone' wuxuu ahaa nooc cusub oo casri ah oo loogu talagalay dadka isticmaala ee doonaya inay ku raaxeystaan ​​...
Ku wanaagsan Huawei, P10 sidoo kale wuxuu heli doonaa Android 9
Huawei waxay cusbooneysiin doontaa nooca ugu dambeeya ee Android 9 Pie, iyada oo ku hoos jirta lakabkeeda qaabeynta EMUI 9, illaa P10 oo la bilaabay 2017. Tartanka ha la xuso.
Huawei Watch GT Firfircoon iyo Daawasho GT Elegant: Saacado cusub oo laga soo qaatay astaanta
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Huawei Watch GT Active iyo Watch GT Elegant, saacadaha cusub ee nooca Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Rasmi: taxanaha Samsung ee 'Galaxy S10' wuxuu heli doonaa 25W taageero degdeg ah oo amar lagu siinayo
Madaxweynaha Samsung Greater China Quan Guixian ayaa shaaca ka qaaday in Galaxy S10e, S10 iyo S10 + (Standard Edition) ay heli doonaan lacag dhan 25W dhakhso ah.
Kaamirada '10o zoom periscope' ee loo yaqaan 'Oppo Reno' ayaa lagu kala qaadaa muuqaal ahaan
Kaamirooyinka loo yaqaan 'Periscope Camera' waa hab lagu bixiyo dherer dherer dherer ahaan foomka caato ah ee casriga ah a.
Waxaa jiri kara OnePlus 6T oo leh 5G
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan suurtogalnimada soosaarida nooca 5G ee sumcadda Shiinaha ee OnePlus 6T oo dhawaan suuqa soo geli doonta.
Galaxy Tab A 8.0 2019: Kiniin cusub oo Samsung ah
Raadi dhammaan waxyaabaha ku saabsan Galaxy Tab A 8.0 2019, kiniin cusub oo Samsung ah oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay isla markaana dhowaan iman doona.
Warar kaas oo MIUI 11 uu imaan doono, lakabka xiga ee qaabeynta Xiaomi
Liu Ming wuxuu qabtay kulan su'aal iyo jawaab ah oo uu ku muujiyay waxyaabo cusub oo lagu darayo MIUI 11, lakabka xiga ee Xiaomi.
Qaar ka mid ah qeexitaanka rasmiga ah ee Samsung Galaxy A2 Core ayaa muuqda, dhammaadka hoose ee xiga ee leh Android Go
Qaar ka mid ah qeexitaannada rasmiga ah ee Samsung Galaxy A2 Core ayaa la dusiyay. Baro wax badan oo ku saabsan moobiilka soo socda ee Android Go.
Naqshadaynta Oppo Reno ayaa lagu soo bandhigay sheeko cusub oo kamaraddeeda ku jirta
Naqshadaynta 'Oppo Reno' ayaa lagu sii daayay kiisaska qaarkood oo muujinaya muuqaal runtii layaab leh kamaraddeeda hore.
Xiaomi Mi 8 Lite iyo moobiillo kale oo raqiis ah oo ay soo diraan shirkadda 'Amazon's Spring Deals'
Sidii caadiga ahayd, shirkadda iibka ee khadka tooska ah waxay ka faa'iideysatay imaatinka guga si ay u ...
Samsung Galaxy Fold oo laga soo duubay fiidiyow si loo caddeeyo jiritaankeeda
Soo saaraha Kuuriya ayaa daabacay fiidiyowga Samsung Galaxy Fold halkaasoo ay ku muujineyso iska caabinta aaladda inay foorarsato. Way ku filnaan doontaa?
Xiaomi taleefanka gacanta ee isku laaban ayaa ka daatay fiidiyowga
Raadi wax badan oo ku saabsan fiidiyowga kaas oo taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Xiaomi folding smartphone' oo lagu soo bandhigi doono sanadkan suuqa si buuxda loo daadiyey.
Vivo S1: Taleefanka cusub ee nooca dhexdhexaadka ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Vivo S1, taleefanka casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee ka soo baxa astaanta Shiinaha ee horay loo soo bandhigay dhawaana la soo bandhigi doono.
Huawei wuxuu bilaabay kiis u oggolaanaya P30 in lagu soo oogo fiilo la'aan
Huawei waxay soo saartay qalab cusub oo loogu talagalay Huawei P30, waana kiis lacag la'aan ah. Tani waxay u ogolaaneysaa taleefanka inuu qaato qaabkan lacag bixinta.
Google Pixel 3a iyo 3a XL: kuwani waa noocyada nalka ee taxanaha Pixel 3 [Leaked]
Markii ugu horreysay, Google waxay soo saari doontaa moodello ka jaban khadkeeda Pixel, waana Pixel 3a iyo 3a XL Kuwani waxay noqon doonaan noocyo la jarjaray.
Galaxy A40: Samsung-dhex-dhexaad cusub
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy A40, Samsung oo ah taleefanka casriga ee cusub ee dhexdhexaadka ah oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Xaqiijiyay: Ma jiri doono nooca 5G ee Huawei P30
Ma jiri doono nooc leh 5G oo ah Huawei P30, maaddaama madaxa shirkadda Shiinaha uu durbaba si rasmi ah u xaqiijiyay saxaafadda.
DxOMark wuxuu siinayaa dhibcaha ugu badan Huawei P30 Pro
DxOMark wuxuu xukumay xukun wuxuuna cadeeyay in Huawei P30 Pro uu yahay taleefanka casriga ee ugu fiican sawirada ugu fiican.
Huawei P30 iyo P30 Pro: Dhamaadka-dhamaadka waa la cusbooneysiiyay
Soo ogow faahfaahinta buuxda ee Huawei P30 iyo P30 Pro, dhammaadka-dhamaadka sare ee Huawei horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay.
Huawei P30 Lite hadda waa rasmi
Raadi wax walba oo ku saabsan Huawei P30 Lite, qiimaha cusub ee dhexdhexaadka ah ee nooca Shiinaha, kaas oo horeyba loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Qiimo-dhimista alaabada Koogeek ee Guryaha ee Amazon
Ma rabtaa fiilo caqli-gal ah oo ka shaqeysa moobilkaaga ama xarig la jaan qaadaya Alexa iyo Google Home? Ka faa'iideyso dalabyadan gaarka ah
Samsung Galaxy A60 wuxuu maraa TENAA wuxuuna soo bandhigayaa kamaradiisa sedex geesoodka ah iyo inbadan
Samsung Galaxy A60 ayaa kujirta wararka mahadnaqa socodkii ay ku sameysay xogta TENAA. Ogow naqshadeeda iyo qeexitaankeeda farsamo.
Lenovo Z6 Pro wuxuu qaban karaa 100 sawir oo sawir ah mahadnaqa kamaradda HyperVision
Teaser cusub oo loogu talagalay Lenovo Z6 Pro ayaa lagu wadaagay Weibo. Tani waxay tilmaamaysaa taageerada 100 megapixel sawiro mahadnaqa kamaradda HyperVision.
Moto G7 fiidiyowga fiidiyowga, waa terminal wanaagsan oo Android ah oo cilladda weyn ay ku jirto batterigeeda
Dib-u-eegista fiidiyowga iyo falanqaynta Moto G7 terminal qurux badan oo Android ah oo aniga xaggaygu leeyahay cillado weyn oo aan u oggolaan doonin inay ku dagaallanto qaybta dhexe
Samsung Galaxy A70 hadda waa rasmi: qeexitaannada, qiimaha iyo helitaanka
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday qeexitaannada iyo astaamaha cusub ee Galaxy A70, oo ah terminal leh shaashad 6,7-inji ah iyo 6 GB oo RAM ah.
Pocophone F1 wuxuu helayaa qaabka Ciyaaraha Turbo
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Xiaomi Game Turbo habkeeda oo si rasmi ah loo bilaabi doono waqti yar Pocophone F1 sida ay horeba u xaqiijiyeen.
Sida loo raaco soo bandhigida Huawei P30 live
Soo ogow sida toos loogula socdo soo bandhigida rasmiga ah ee Huawei P30 oo lagu soo bandhigi doono Paris bisha Maarso 26.
Alcatel 1X 2019 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka Alcatel 1X 2019 ee Isbaanishka oo aad hadda si rasmi ah uga iibsan karto taleefanka sumaddan.
Huawei Raaxo 9s iyo Ku raaxayso 9e: Nooca dhexe ee cusub ee nooca Shiinaha
Raadi wax walba oo ku saabsan Huawei raaxeysiga 9s iyo raaxeysiga 9e, moodooyinka cusub ee dhexdhexaadka ah ee nooca Shiinaha ee horay looga bilaabay Shiinaha.
Samsung Galaxy Note FE wuxuu helaa cusbooneysiinta Android Pie
Samsung ma iloobin isticmaaleyaasha Galaxy Note FE waxayna sii deysay cusbooneysiinta Android 9.0 Pie oo leh OneUI qalabkan.
Nokia X71 wuxuu imaan lahaa isagoo ah taleefankii ugu horreeyay ee HMD Global oo leh shaashad daloola Abriil 2
HMD Global ayaa ku dhawaaqday in Nokia X71 laga daawan doono Taiwan bisha Abriil 2deeda. Waxay ku imaan laheyd shaashad daloolsan iyo kamarad gadaal seddex laab ah.
Samsung Galay Fold ayaa imaan doona Yurub bisha May 3deeda
In kasta oo ay u muuqato in qaabka isku laaban ee Huawei, Mate X, uu helay dib u eegis ka wanaagsan xagga ...
Xaraashka rasmiga ah ee cusub ee taxanaha 'Huawei P30' wuxuu muujinayaa inuu la imaan doono EMUI 9.1 oo ku saleysan Android Pie
Taxanaha Huawei P30 wuxuu la imaan doonaa nooc cusub oo lakab ah oo la yiraahdo EMUI 9.1, waxayna noqon doontaa berri, 26-ka Maarso, halkaasoo lagu soo bandhigi doono magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Honor wuxuu bilaabay inuu cusbooneysiiyo cusbooneysiinta 'Android Pie' ee ku saleysan EMUI 9.0.1 ee loogu talagalay noocyada caalamiga ah ee Honor 8X.
Wax badan ayaan ka maqalnaa Motorola One Vision maalmihii la soo dhaafay. Hadda, waxaa si rasmi ah u muuqda warsaxaafadeedka One Vision ayaa soo muuqday.
Raadi wax badan oo ku saabsan dayactirka Galaxy Buds oo ah mid fudud oo rajo galinaya dadka isticmaala ee doonaya inay iibsadaan.
Soosaarayaasha cusub ee OnePlus 7 ayaa muujinaya kamaraddeeda
Ka raadi waxbadan oo ku saabsan turjumaadahan na tusaya kaamirooyinka OnePlus 7 ee la doonayo in lagu soo bandhigo suuqa qeybta hore ee sanadkan.
Habka kamaradda Nightscape wuxuu imaan doonaa Realme 1, 2 Pro iyo U1 oo wata Pie Android simistarkan koowaad
Maamulaha guud ee shirkada ayaa shaaca ka qaaday goorta qaabka kaamirada Nightscape ay imaaneyso Realme 1, 2 Pro iyo U1, iyada oo loo marayo boostada twitterka
Fold Galaxy-ku ma lahaan doono nooc uu wato processor Exynos
Fold Galaxy wuxuu gaari doonaa suuqa caalamiga ah kaliya processor processor Qualcomm ee Snapdragon 855, iyada oo aan la helin nooc uu maamulo Exynos 9820
Faahfaahinta ugu horreysa ee Xiaomi Mi A3 waa la sifeeyaa
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaannada ugu horreeya ee Xiaomi Mi A3 ee la xaday toddobaadkan oo na sii tilmaamo ku saabsan taleefanka.
HMD Global waxay cadeynaysaa in Nokia 7 Plus uusan basaasin dadka isticmaala
Maalmo ka hor, waxaa jiray warbixino sheegaya in HMD Global ay xogta isticmaale u direyso Shiinaha. Qaabka ay u maleyneyso inuu u sameeynayo waa Nokia 7 Plus.
Meitu ayaa joojin doonta soo saarida taleefannada gacanta
Wax badan ka ogow ku dhawaaqida Meitu oo xaqiijineysa inay joojin doonaan soo saarista taleefannada casriga ah si joogto ah sababo la xiriira iibka oo xumaaday
Razer Phone 2 Android Pie-based kernel isha koodhka hadda si rasmi ah ayaa loo heli karaa
Razer Phone 2 wuxuu helay cusbooneysiinta Android 9.0 Pie wax ka yar bil ka hor, oo hadda lambarkiisa ...
Vivo NEX S wuxuu ku helayaa cusbooneysiinta 'Android Pie' dhowr hagaajin iyo warar
Vivo NEX S wuxuu helaa Android Pie. Cusboonaysiinta waxay keeneysaa tan astaamo cusub iyo is-dhexgal isticmaale cusub.
Xiaomi Mi Band 4 wuxuu lahaan doonaa bluetooth 5.0 iyo NFC chip
Wararkii ugu dambeeyay ee laxiriira Mi Band 4 waxay tilmaamayaan inay yeelan karaan bluetooth 5.0 iyo NFC chip si lacagta loo bixiyo
Huawei Ku raaxayso qeexitaannada 9e ee xaday [+ Renders rasmi ah]
Faahfaahin ayaa ka soo baxeysa mid ka mid ah aaladaha la soo bandhigi doono bishan Maarso 25, Huawei Enjoy 9e. Qeexitaannada xaddidan iyo kuwa bixiya.
OPPO waxay diiwaangelisaa shan taleefan oo ah nooca Reno ee Yurub
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan diiwaangelinta shan taleefannada casriga ah ee OPPO ee ay ka diiwaangashan tahay Yurub gudaheeda inta u dhexeysa Reno ee suuqa soo gali doonta bisha Abriil.
Dhibcaha DxOMark ee Sony Xperia XZ3 runtii waa wax laga xumaado
Waaxda kamaradaha Sony Xperia XZ3 waa niyad jab, sida laga soo xigtay DxOMark, in kasta oo ay adag tahay in la rumaysto.
Samsung Galaxy S10 5G wuxuu iibin doonaa iibinta Abriil 5
Samsung ayaa la wadaagtay warka cusub ee ku dhawaaqaya inay ka bilaabi doonto Koonfurta Kuuriya Galaxy S10 5G toddobaadka ugu horreeya ee bisha Abriil.
Nubia Red Magic 3 wuxuu soo bandhigi doonaa nidaam qaboojin isku jira
Nubia waxay qarka u saaran tahay inay soo bandhigto telefoonkeeda ciyaaraha ee soo socda, oo aan cid kale ahayn Nubia Red Magic 3. Taleefanka ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Abriil.
Xiaomi Mi 9 SE ayaa dhawaan laga bilaabi doonaa adduunka
Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga caalamiga ah ee Xiaomi Mi 9 SE oo ay tahay inuu dhaco wax yar ka dib sidaad horayba u baratay.
Archos wuxuu ku dhawaaqayaa 21 ″ kiniin weyn oo loogu talagalay ciyaaraha guddiga
Haddii aad raadineyso kiniin weyn si aad u ciyaarto ciyaaraha guddiga, tani waxay noqon laheyd Archos Play Tab oo leh shaashad 21-inji ah. Waxaa la heli karaa dhamaadka sanadka.
Vivo waxay diyaarinaysaa soo bandhigida laba darajo hoose oo cusub: waxay ka soo muuqdeen Geekbench
Laba taleefan oo casri ah, oo ku taxan 'Vivo 1901' iyo 'Vivo 1902', ayaa lagu arkay Geekbench, waxayna noqon karaan xubno cusub oo ka mid ah taxanaha Vivo V ama Y.
Launcher Mint: soo dejiso oo rakib qalabka cusub ee Xiaomi launcher [APK]
Launcher Mint waa qalab cusub oo loo yaqaan 'Xiaomi launcher' kaas oo horeyba ugu jiray Play Store isla markaana laga heli karo soo dejinta iyada oo loo marayo APK Mirror.
Taxanaha 'P30' ee Huawei wuxuu la yimaadaa taageero loogu talagalay qaabeynta 3D iyada oo loo marayo kamaradda ToF
Telefoonada Huawei P30 waxay lahaan doonaan taageero qaabeynta 3D, taasoo ka dhigaysa tii ugu horreysay ee taxanaha P ah ee muuqaalkan leh.
Oppo waxay hadda diyaar u tahay inay soo bandhigto taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G: waxay heshay shahaadada CE
Oppo weli waxay noqon kartaa kii ugu horreeyay ee iibiya taleefankeeda 5G ee Shiinaha. Qalabka ayaa hadda helay shahaadada CE iyo CTC oo horumarsan.
Galaxy A90 ayaa noqon doonta shaashadii ugu horreysay ee Samsung sameysa
Wax badan ka ogow naqshada Galaxy A90, oo noqon doonta taleefankii ugu horreeyay shaashadda Samsung ee suuqa ku soo socda isla markaana soo socda.
Waxaa jiri doona Razer Phone 3 sanadkan
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka Razer ee ah inay soo saaraan jiilka saddexaad ee taleefannadooda casriga ah, oo ay tahay inay dhacaan dabayaaqada sanadkan.
Samsung Galaxy Watch Firfircoon ayaa timid Spain
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka Samsung's smartwatch cusub ee Spain, Galaxy Watch Active oo aad hadda si rasmi ah u iibsan karto.
Huawei Raaxo 9S, oo ah P Smart + awood badan oo hadda awood badan leh
Markii la bilaabay Huawei P Smart + 2019, oo dhowr toddobaad ka hor jiray, waxaan ogaanay isku ekaanshaha u dhexeeya ...
Nubia Red Magic 3 waxay isku diyaarineysaa inay la timaado batari ka badan 5,000 Mah
Nubia's Red Magic line of telefoonada ciyaaraha ayaa suuqa ku jiray muddo hal sano ah hadda,…
Mid ka mid ah bartamaha soo socda ee Motorola, ee 'Moto Z4 Play', ayaa shahaadada ka helay FCC, oo ah hay'ad maareynta sharci dejinta Mareykanka ah.
Nintendo's casriga casriga ee ciyaaraha ayaa noqon kara mid dhow
Waxay umuuqataa in taleefanka casriga ah ee Nintendo uu xirmi lahaa, bedel cusub oo si qaas ah u kobcin lahaa waaxda telefoonka ciyaarta
Gawaarida Motorola One Vision waxay muujinayaan dareeraha 48MP, bandhig 21: 9, iyo inbadan
Motorola One Vision waa la dusiyay. Qeexitaannadiisa farsamo iyo astaamaha ugu waaweyn ayaa la soo saaray.
Motorola One Vision waxay ku dalxiis tagtaa Geekbench oo ay weheliso Exynos 9610
Motorola One Vision ayaa ka soo muuqatay madasha Geekbench iyadoo Samsung Exynos 9610 chipset ah uu noqon doono Motorola P40.
Vivo waxay ku dhawaaqeysaa furitaanka dukaan mustaqbal mustaqbalka cusub ee bisha Maarso 22
Vivo waxay ku dhawaaqday furitaanka fikrad cusub oo dukaan ah, oo loo yaqaan 'Vivo Lab'. Dukaankii ugu horreeyay noociisa ah ayaa laga furi doonaa magaalada Shenzhen, Shiinaha 22-ka Maarso.
Galaxy A8 2018 waxaa loo cusbooneysiiyay Android Pie oo leh One UI
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie update' oo ku soo fool leh One UI ee isticmaalayaasha leh Samsung Galaxy A8 2018 ee Nederland.
Bluetooth SIG wuxuu cadeynayaa nooc 5G ah oo ah Oppo Reno
Oppo wuxuu ku dhawaaqi doonaa Oppo Reno Abriil 10. Taleefanka casriga ah ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay inuu soo bandhigi doono taageerada Snapdragon 855 iyo 5G.
Nokia 5.1 wuxuu ku helaa Android Pie iyada oo la cusbooneysiinayo cusub
HMD Global ayaa cusbooneysiisay Nokia 5.1, oo ah qalabkii ugu dambeeyay ee loo qorsheeyay inuu ka helo OS-kii ugu dambeeyay ee Google rubuca koowaad ee 2019.
BQ waxay ku dhawaaqeysaa inaysan jiri doonin mobiillo kale oo ka hooseeya astaanteeda
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta dhammaadka bilaabista taleefannada BQ ee hoos imanaya astaanteeda asalka ah si aad ugu samayso Vsmart.
Vsmart wuxuu ku degaa Spain Isagoo wata telefoonadiisa cusub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan afarta taleefannada gacanta ee Vsmart uu ku galo Spain. Calaamaddu waxay soo bandhigaysaa Firfircoonida 1, Firfircoon 1+, Farxadda 1 iyo Farxadda 1+ si rasmi ah.
Raadinta MicroSD raqiis ah? Hadda waxaad ku iibsan kartaa 256 GB Samsung xasuus ka yar 46 euro
Taleefannada casriga ahi maanta waxay leeyihiin awood kaydineed oo kordhaysa. In kasta oo ay run tahay in dhowr sano ka hor ...
Xiaomi waxay bilaabi doontaa jiilka afraad ee Mi Band 4 sanadkan
Jiilka afraad ee Mi Band, lambar 4, ayaa la bilaabi doonaa sanadkan oo dhan, sida ay shirkaddu sheegtay, laakiin ma aysan cayimin goorta ay billaabi doonto.
Xiaomi waxay iibisay ku dhowaad 120 milyan oo taleefannada gacanta ah 2018
Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka taleefannada casriga ah ee ay 'Xiaomi gaareen' 2018 adduunka oo dhan, taas oo muujineysa koritaanka astaanta.
Redmi Go wuxuu si rasmi ah u yimid Spain
Faahfaahin dheeraad ah ka hel imaatinka 'Redmi Go' ee Spain, taleefanka ugu horreeya ee Android Go ayaa hadda si rasmi ah loo iibsan karaa.
Vivo X27 iyo X27 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Raadi wax walba oo ku saabsan Vivo X27 iyo Vivo X27 Pro, moodooyinka cusub ee bartamaha-dhexe ee astaanta Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Maamuus 10i: Nooca cusub ee bartamihiisu hadda rasmi yahay
Raadi wax badan oo ku saabsan Honor 10i, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee dhexe ee ka imanaya astaanta Shiinaha, oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Galaxy A20: Samsung oo ah taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan Samsung dhex dhexaadkiisa cusub, Galaxy A20 oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Ruushka oo dukaammada ku dhufan doona dhawaan.
OPPO AX5s: Nooca noocyadiisa cusub ee shirkaddu soo galisay
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan OPPO AX5s, taleefanka cusub ee hooseeya ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay Shiinaha.
Samsung Galaxy A50 ayaa si rasmi ah u timid Spain
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Samsung Galaxy A50 ee Isbaanishka, astaanta cusub ee calaamadda dhexe.
Soo ogow qeexitaannada 'Redmi 7', taleefanka cusub ee heerka gelitaanka ee nooca Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.